Tag: izvi | Martech Zone
Mugovera, Mbudzi 7, 2020 Svondo, Ndira 24, 2021 Douglas Karr
Robert Half Technology uye Iyo Inogadzira Boka rakaburitsa chidzidzo uye infographic, Dhijitari Kushambadzira Dissonance, uko 4 mu10 maCIO anoti kambani yavo haina rutsigiro runodiwa kumabasa ekushambadzira edigital. Kunyangwe ini ndisina chokwadi kuti ichokwadi, kudzidza kwacho kunotyora imwe dhata pasi kuita mabhakiti maviri, vatungamiriri veIT uye vatungamiriri vekugadzira. Handina chokwadi chekuti ndinotenda kune rumwe rudzi rwekuwirirana pakati pekuve munhu weIT kana kuve munhu akasika.
NeChishanu, Gunyana 26, 2014 NeChishanu, Gunyana 26, 2014 Scott Vaughan
Izvo zviripo neramangwana reKushambadzira Tekinoroji zvakakwikwidzwa uye zvakatorwa kumusangano wekutanga weMartech muBoston. Icho chaive chiitiko chakatengeswa-kunze chakaunza pamwechete vatungamiriri vepfungwa dzakasiyana munyika yeMartech. Pamberi pacho, ndakave nemukana wekubatana nasachigaro wemusangano, Scott Brinker, kuti ndikurukure shanduko yeindasitiri uye kuti basa raChief Marketing Technologist rave sei rinofanira-kuve nebasa mukati memasangano ekutengesa pasi rese. Mukutaura kwedu, Scott